Dhageyso: Xildhibaan Fiqi oo sheegay hal arrin oo dowladda ku qasabtay inay xirto CS Shakuur - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Xildhibaan Fiqi oo sheegay hal arrin oo dowladda ku qasabtay inay...
Dhageyso: Xildhibaan Fiqi oo sheegay hal arrin oo dowladda ku qasabtay inay xirto CS Shakuur
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ciidamada Dowladda gaar ahaan kuwa NISA ayaa xalay weerar culus ku qaaday guriga uu Muqdisho ka daganaa Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamidaa Mucaaradka kasoo horjeedo dowladda Soomaaliya.
Haddaba Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkii xalay lagu qaaday Hoyga Siyaasiga C/Raxmaan Cabdi Shakuur ay ku timid fashil heysta madaxda Sare.
Xildhibaanka ayaa aad u cambaareeyay weerarka oo uu sheegay in ay si barer ah u qaadeen ciidanka dowlada Somalia, taasina ay tahay mid ka hor imaanaysa dimuqraadiyada sida uu sheegay.
Axmed Macalin Fiqi ayaa waxaa uu sheegay in weerarka lagu qaaday Siyaasiga ay la xirriirto labada xildhibaan ee shalay xeer ilaaliyaha Qaranka dalbaday In Xasaanada laga qaado.
Waxa uu sheegay in tani ay keeni karto in Xildhibaanada Qaranka ay kacdoon sameeyaan isla markaana Xildhibaanada fasaxa galay ay kulamadoodii ay dib u bilaabaan.
Sidoo kale waxa uu sheegay in weerarka lagu qaaday Guriga C/raxmaan Cabdi Shakuur uu daba joogo kacdoonkii ka dhashay labada Xildhibaan ee Xeer ilaaliyaha uu sheegay in xasaanada lagala noqonayo.
“Weerarkii xalay xqiiqdii waa mid madaxda Qaranka ay ku doonayaan in ay ku daboolaan fashilka heysta iyo in looga hortago kacdoonka uga imaanaya Xildhibaanada oo diyaar u ah in ay kulamadoodii caadiga ahaa qabsadaan ayuu yiri xildhibaanka”.
Halkaan hoose ka dhageyso hadalkiisa